TJ China Freight သည်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီးဖောက်သည်များအားသမုဒ္ဒရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်စီစဉ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် LCL နှင့် FCL ၀ န်ဆောင်မှုကိုတစ် ဦး မှတစ် ဦး သို့တစ်အိမ်မှတစ်အိမ်အထိဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အသင်း ၀ င်တစ် ဦး စီမှနှစ် ၂၀ အတွေ့အကြုံရှိသည့်အသင်းတစ်ခုရှိသည်။
TJ China Freight သည် Cosco, EMC, YML စသည့်ရေကြောင်းလိုင်းအားလုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်။ ရာသီဥတုအခြေအနေများ၌အာမခံထားသောနေရာနှင့်ထရပ်ကားရရှိနိုင်မှုကိုအာမခံရန်အတွက်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအမြောက်အများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့စာချုပ်နှုန်းထားကိုသတ်မှတ်ထားသည်။
TJ FREIGHT တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လေဆိပ်လုပ်ငန်းများနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့များရှိပြီးတရုတ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းကိုယ်ပိုင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစနစ်လည်းရှိသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့၏ကျွန်ုပ်တို့၏ airfreight ဖြေရှင်းချက်ကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်: ငါတို့သည်သင်တို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုလေကြောင်းဖြင့်သူတို့ရဲ့ ဦး တည်ရာကိုလျင်မြန်စွာ, လုံခြုံစွာနှင့်ထိထိရောက်ရောက်ရွှေ့။
ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ငါတို့နှင့်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောလက်၌ရှိသည်” ဟူသောယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အစဉ်မပြတ်ကြိုးစားသည်။
We supply the whole complex of services necessary for shipping to အမေဇုံ FBA，like label，packing，customs clearance and so on.
ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့သည်ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုစီမံပြီးကုန်ပစ္စည်းအား FBA သို့ထိရောက်စွာနှင့်ပိုမိုလုံခြုံသောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်သို့ရောက်ရှိရန်သေချာစေပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်နှင့်အဆင်ပြေစေရန်ရည်ရွယ်သည်။
TJ China ကုန်တင်ကုန်ပစ္စည်းတွင်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းကိုကျွမ်းကျင်စွာကိုင်တွယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု၊ အဆင့်မြင့်စာရွက်စာတမ်းများ၊ ခြေရာခံခြင်းနှင့်ဒေတာသိမ်းဆည်းခြင်းတို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏တင်ပို့မှုကိုအရည်အသွေးနှင့်အချိန်ကိုက်မှုအရအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
TJ China ကုန်တင်ကုန်သည်များသည်အမြန် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ခြေရာခံဖြေရှင်းမှုများနှင့်အတူ DHL, UPS နှင့် FEDEX တို့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများသည်ဖောက်သည်များ၏အချိန်၊ ကြိမ်နှုန်းနှင့်နှုန်းထားများအပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ဖောက်သည်များနှင့်နီးကပ်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။
TJ China Freight သည်နိုင်ငံအားလုံးမှတင်သွင်းသောကုန်ပစ္စည်းများအတွက်အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သွင်းကုန်တင်သွင်းသူများအားဒေသဆိုင်ရာစိတ်ကြိုက်လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ သူတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုတင်သွင်းရန်အစာရှောင်၊
ကျွန်ုပ်တို့၏အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး ၀ န်ထမ်းများသည်ဒေသဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ၊ အခြေအနေများနှင့်စည်းမျဉ်းများကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်။ ပွဲစားသည် ၄ ​​င်းတို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများကိုအပြည့်အ ၀ ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
ရှင်းလင်းခြင်းနှောင့်နှေးမှုမှကာကွယ်ရန်လိုအပ်လျှင်လိုအပ်သောသွင်းကုန်နှင့်တင်ပို့သည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပါ ၀ င်သည့်သင့်တော်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သေချာစွာသေချာစေသည်။
TJ China သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဂိုဒေါင်ကိုသယ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံနှင့်ပူးပေါင်းသည်။
ဒါတွေဟာ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယပေးခြင်း။
1. 7/24 သိုလှောင်ဝန်ဆောင်မှု
4. 7/24 CCTV ကိရိယာများ
TJ China Freight Co. , Ltd သည်တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန၌မှတ်ပုံတင်ထားသော NVOCC ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူများအားသူတို့၏ FCL & LCL နှင့် AIR ကုန်တင်များအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ထိရောက်သောနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများကိုပေးအပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများတွင်အဓိကအားဖြင့် China Freight, Sea Freight, Air Freight ပါ ၀ င်သည်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွေ့အကြုံရှိသော ၀ န်ထမ်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူသူများအားအရည်အသွေးမြင့်မားသော၊ ရွေးချယ်ထားသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ယက်မှထောက်ပံ့ထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုသည်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်တွင်ပါဝင်သည်။